Tsy Fitoviana Manerantany Ao Am-paosinao : Ny Fomba Amelàn’ny Finday Avolenta Mora Vidy Sy Ny Politika Baranahiny Antsika Harefo Eo Anatrehan’Ny Fijirihana · Global Voices teny Malagasy
The people who can least afford are often the most vulnerable to fraud and harassment when their digital privacy is violated.
Voadika ny 28 Mey 2017 8:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Magyar, Español, English
Mpivarotra finday any Losaka, Zambia. Sarin'i Curious Lee avy amin'ny Filckr (CC BY-NC-SA 2.0)
Nosoratan'i Nathalie Maréchal. Mpikambana zokiolona ao amin'ny Ranking Digital Rights i Nathalie.
Raha resaka finday avo lenta, tsy nohariana hitovy ny mpampiasa rehetra. Ny olona mandray vola kely na antonony manerana izao tontolo izao dia matetika mampiasa fitaovana Android takatry ny volany mba hifaneraserana sy hizarana vaovao, fa matetika ireo finday mora vidy dia mamela ireo mpampiasa harefo noho ny fandrahonana sy ny fijirihana an-tserasera.
Ny 88% ny tsena iraisam-pirenena dia ahitana ireo fitaovana mampandeha ny rafi-pitrandrahana ho an'ny Android, raha ny 12% sisa no an'ny iPhones. Fa tsy ny fitaovana Android rehetra koa no noforonina hitovy: ireo karazany izay namboarina ary arahin'ny google maso avy hatrany, toy ny Nexus sy ny finday avo lenta Pixel, dia voaaro kokoa amin'ny fijirihana miohatra amin'ny fitaovana namboarin'ny mpanamboatra toy ny Samsung, Huawei, Sony ary Xiaomi. Izy ireo ihany koa dia lafo kokoa, raha oharina amin'ny iPhones.
Vokatr'izany, ireo mpampiasa manankarena izay afaka mividy fitaovana hiaka farany isaky ny taona vitsivitsy dia voaaro amin'ny fandrahonana maro noho ny ankamaroan'ireo mpampiasa — mampiasa ireo karazany mora kokoa na modely efa niasa, ary tsy manolo azy ireny matetika — izay mety ho tratry ny fandrahonana.
Midika izany fa ny olona izay tsy mahatakatra afa-tsy ny mora no mora indrindra andairan'ny fisandohana, ny fangalarana torohay, fisolokiana, ny fanarahamaso an-tserasera sy fanorisorenana, ary ny zavatra ratsy hafa mety hatrehin'ny olona iray rehefa nidirana an-keriny ny fiainany manokana an-tserasera.
Resaka tsy fitoviana lehibe izany nefa zara raha fantatra manerantany.
Ny fikarohana vaovao avy amin'ny Ranking Digital Rights, fikambanana tsy mitady tombontsoa mpanao fikarohana izay manombana ny fomba fanaon'ireo orinasa matanjaka indrindra erantany momba aterineto, finday sy fifandraisandavitra izay miantraika amin'ny zon'ny mpampiasa, dia nahita fa tsy manome vaovao fototra momba ny fiantraikan'ny finday avo lenta (sy ny rindrambaiko izay mampandeha azy ireny) ho an'ny fiarovana ny mpampiasa azy ireo orinasa mikirakira izany.
Ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny finday dia miteraka soritra nomerika izay afaka ampiasaina mba hanoritana kisary maneho ny tena maha-isika antsika; ny zavatra ataontsika, izay vidiantsika ary na dia izay eritreretintsika aza. Sarobidy ho an'ny mpivarotra ity tahirin-kevitra ity, fa ihany koa ho an'ny fitondram-panjakana, ireo mpanao heloka bevava, ary ny olon-kafa izay mety te-hanao ratsy amintsika.
Fiaran'ny MTN tany Oganda. 28 Novambra 2005, CC 2.0
Ahitan-dry zare mpikarotra olana ara-teknika vaovao hatrany ny rindrambaikon'ny finday izay afaka trandrahan'ireo mpanafika (anisan'izany ireo mpisehatra tohanan'ny fanjakana), izay manome alàlana azy ireo hametraka rindrambaiko mpitsikilo na mifehy avy any lavitra ireo fitaovana, amin'ny alalan'ny fandefasana hafatra amin'ireo olona kendreny. Nandrakotra tranga maromaro tamin'ireny ny Global Voices, mikendry ireo mpikatroka Iraniana, mpampiasa aterineto avy any Tibet, sy ny hafa.
Raha toa ny mpampiasa sasany mandray “fanitsiana” fiarovana, na fanavaozana avy amin'ny mpanamboatra rindrambaiko izay mitsabo ilay olana, ny sasany kosa tsy mahazo. Ary matetika tsy manazava amin'ireo mpampiasa ny antony nanaovana ilay fanavaozana ireo mpanamboatra fitaovana.
Maro ny orinasa no manana fandaharanasa “famborahana tomponandraikitra ” handrisihana ireo izay mahita ny fikatsoana na olana ara-teknika mba hilaza izany amin'izy ireo, mba hahafahan'izy ireo mandroso vahaolana ary manala ireo olana ireo amin'ilay fitaovana ary mampandeha ilay rindrambaiko, matetika amin'ny alalan'ny fanavaozana rindrambaiko.
Araka ny fomba fijerin'ny Apple sy Google, miasa tsara izany– ireo orinasa roa mamokatra ny rindrambaiko izay mamelona ny 99.6 isan-jaton'ny finday avo lenta eran-tany. Tamin'ny fotoam-pahavaratra, fony hitan‘ny vondron'ireo mpikaroka momba ny fiarovana notarihan'i Bill Marczak, ary avy eo mpianatra iray nahazo maripahaizana tao amin'ny anjerimanontolon'i Berkeley, fa ny governemantan'ny Emira Arabo Mitambatra dia nampiasa fomba tena sarobahàna, fomba tsy fantatra tany aloha mba hanafihana ireo mpiaro ny zon'olombelona, amin'ny fanovàna ny iPhone-n'izy ireo ho tonga bibikely izay mandrakitra izay rehetra manodidina azy. Soa ihany, Ahmed Mansoor, Arabo mpanohitra, fa tsy latsaka tao amin'ilay fanafihana, fa nampilaza an'i Marczak sy ireo mpiara miasa aminy, izay nitatitra izany tany amin'ny Apple. Nanampy ora iasana ireo injenieran'ny Apple mba hamoahana fanitsiana ho an'ireo mpampiasa tao anatin'ny iray volana latsaka. Mazoto koa ny ekipan'ny fiarovana ao amin'ny Android.
Manjo ireo hafa mpanamboatra fitaovana Android toy ny Samsung, HTC, ary Xiaomi ilay olana.
Noho ny antony samy hafa, novain'ireo mpanamboatra ny rindrambaikon'ny loharano misokatry ny rafi-pitrandrahana Android mba hahasarotra ny fanomezana fanavaozana rindrambaiko. Ny kaody avoakan'ny Google dia tsy maintsy ovàna mba hifanojo amin'ny fanovàna izay natao tamin'ilay rafi-pitrandrahana. Ireo orinasa mpikirakira finday koa dia afaka manao ny fanovàna mikasika izay nataon'ny mpanamboatra ilay fitaovana, manampy ihany koa dingana hafa amin'ilay fanovàna sy manemotra bebe kokoa ny famoahana ny fanavaozana rindrambaiko.Tsy mamela fanovàna toy izany amin'ny iOS i Apple, ary i Google dia manaraka maso ny dingan'ny fanavaozana ny finday Nexus sy Pixel novidiana tao amin'ny Tsenaben'i Google.
Vokatr'izany, na oviana na oviana dia misy an-tapitrisany maro mpampiasa fitaovana Android izay marefo manoloana ireo zavabita efa fantatra ny fitaovan'izy ireo — fanafihana izay fantatry ny daholobe ao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny fiarovana informatika IT erantany. Izany dia toy ny fanidiana ny varavaranao amin'ny fanalahidy izay ananan'ny olona an-jatony ny fanalahidiny. Ary satria mora kokoa noho ny Nexus sy Pixel na iPhones ireny fitaovana ireny, ireo olona mahantra, voalikiliky ny fiaraha-monina, ary tsy maharaka loatra ny teknolojia — ireo olona ireo izay tena mpiditra amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny finday — no tena mety hizaka ny voka-dratsin'izay mety ho fanafihana.
Ranking Digital Rights – Fandaharana Zo Nomerika: Tomban'ny Fandraisana Andraikitry ny Orinasa, 2017
Mandahatra orinasa 22 amin'ny tondro 35 ao anatin'ny sokajy telo ny tombana 2017. Ireo tondro ireo dia mandrefy raha toa ka mamoaka politika mahakasika ny fahalalahan'ny maneho hevitra ankalalahana sy ny fiainana manokan'ireo mpampiasa, ary ny fomba ataon-dry zareo amin'ny fampiharana izany. Mandinika ny politikan'ny orinasa foibe, ny orinasa mpanatanteraka ary ireo any amin'ny sampan-draharaha voafidy (arakaraky ny rafitry ny orinasa) ilay tombana.
Vakio ny momba ny fomba fiasa, fomba fikarohana ary ny fomba anamarihan‘ny RDR ny orinasa tsirairay ao amin'ny tranonkalany. i Rebecca MacKinnon, mpiara-manorina ny Global Voices no nanorina ny Ranking Digital Rights – Fandaharana ny Zo Nomerika.
Araka ny tahirin-kevitra vaovao navoakan'ny Google, ny antsasaky ny fitaovana Android rehetra ihany no nandray fanovàna fiarovana tamin'ny taona 2016, ary tsy misy afa-tsy ny 3% amin'ny fitaovana manerana izao tonolo izao no mampiasa ny karazany farany amin'ilay rafi-pitrandrahana, “Nougat”. Noho ny fahafantarana fa tena olana lehibe ity, ny Vaomiera Federalin'ny Varotra any Etazonia sy ny Vaomiera Federalin'ny Fifandraisandavitra dia niara-nanomboka fanadihadiana momba ny famoahana fanavaozana manokana ny fiarovana finday, na dia tsy nisy tamin'ireo fikambanana ireo aza namoaka valiny avy amin'ireo orinasa, herintaoa mahery taty aoriana.
Ny fanondroana ny andraikitry ny orinasa momba ny Fandaharana ny Zo Nomerika amin'ity taona 2017 ity dia mampitaha ny firotsahana an-tsehatra sy ny fandraisana andraikitra mahakasika ny zon'ny mpampiasa, anisan'izany ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fiainana manokana, nataon'ireo orinasa 22 mpikirakira aterineto sy fifandraisandavitra erantany. Ahitana ny Samsung, izay mitàna ny ankamaroan'ny fitaovana Android manerana izao tontolo izao, ary ireo 10 mpamtsy ny fifandraisandavitra erantany izany. Tsy misy na iray aza amin'ireo orinasa 11 nandray anjara tamin'ny fizarana fanavaozana rindrambaiko Android (hafa ankoatra ny Google) nanambara vaovao momba ny fanovàna natao tamin'ny dika tahirin'ny Android, na inona ny vokatr'izany fiovàna izany eo amin'ny fanapariahana ny fanavaozana ny fiarovana .
Ma izany aza, tamin'ny orinasa mpikirakira finday avo lenta telo narahana maso, Google irery no nanondro ny daty izay azo antoka handraisan'ny karazana fitaovana samy hafa ireo fanavaozany. Azo antoka fa hahazo fanavaozana rindrambaiko ireo fitaovana Nexus sy Pixel, fara-fahakeliny roa taona aorian'ny nivoahany tao amin'ny Tsenaben'i Google, ary handray fanovàna fiarovana fara-fahakeliny telo taona taorian'ny nivoahan'ny fitaovana, na fara-fahakeliny 18 volana taorian'ny fotoana farany nivarotan'ny Tsenaben'i Google ilay fitaovana, izay lavalava kokoa.
Tsara kokoa raha nitarin'i Google lavalava kokoa ity fotoana ity, nefa fara-faharatsiny omeny mazava tsara ity fandraisana andraikitra ity ho an'ny mpampiasa. (Na ny Apple na ny Samsung dia samy tsy manome ny hoe “tsara ampiasaina alohan'ny”). Miankina be dia be amin'ny findaintsika isika — ary ireo olona mandray karama kely izay tsy manana aterineto mandeha haingana na solosaina ao an-trano no tena miankina betsaka aminy. Na manankarena na mahantra, dia manana zo hahalala isika hoe mandra-pahoviana no azo antoka ny fampiasàna ireo finday ireo, ary inona ny ataon'ireo orinasa mba haha-voaaro antsika.
Mpikambana zokiolona ao amin'ny Ranking Digital Rights Nathalie Maréchal ary mpiadina manomana ny PhD ao amin'ny Anneberg, Sekoly momba ny Fifandraisandavitra sy Fanaovana Gazety ao amin'ny Anjerimanontolon'i Kalifornia Atsimo. Araho ao amin'ny @marechalUSC izy.